Simba kutangazve iyo iPhone 8 inova yakaoma | IPhone nhau
Jesu anotema | | iPhone 8, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Sezvo mazuva achifamba kubva pakatangwa iyo nyowani iPhone 8 uye 8 Plus Tiri kusvika pakuziva rumwe ruzivo nezve ivo, mamwe acho anonakidza chaizvo uye panguva imwechete zvakaoma kuita. Tinotaura nezvazvo simba restart pane aya maPhones matsva, maitiro ave zvakanyanya kuomarara kupfuura zvataiziva kusvika zvino.
Muchikamu chino tiri kuenda dzidzisa nhanho nhanho maitiro aya anofanira kuitwa kuitira kuti, kunyangwe nekuoma kwainako, iwe usine dambudziko kuzviita munguva idzo iyo iPhone yakagwamba uye hapana imwe sarudzo yekuitangazve.
2 Force restart pane iPhone 8 uye 8 Plus
Kusvika isati yatanga iyo iPhone 7 uye 7 Plus, Maitiro ekumanikidza kutangidza chishandiso payaive chando muapp kana pahwindo repamba raive nyore uye nekukurumidza. Taifanira kungodzvanya iyo bhatani repamba uye bhatani remagetsi kwemasekondi mashoma uye zvakangoerekana zvatanga.
Apple payakazivisa kuvhurwa kwemamodeli 7 uye 7 Uyezve Akaiperekedza nekushandurwa kwebhatani rekutanga, achirega kuve bhatani rakadaro. Naizvozvo, kusanganiswa kwemabhatani ekumanikidza kutangazve kwaizorega kushanda uye isu taizofanira kuzviita ne simba uye vhoriyamu pasi mabhatani panguva imwe chete.
Kubva mavhiki mashoma apfuura, patakaziva izvo zvitsva iPhone 8 uye 8 PlusSezviri pachena bhatani rekutanga reizvi rakafanana neyemhando dzakapfuura asi, kumanikidza kutangazve, maitiro acho akasiyana zvachose, achive akaomesesa.
Force restart pane iPhone 8 uye 8 Plus
Sezvatakataura, maitiro aya akagadziridzwa uye ikozvino haachakwanise kumanikidza simba uye vhoriyamu pasi mabhatani panguva imwe chete sezvatakaita pane iyo iPhone 7 uye 7 Plus. Mhinduro kuiyi kiyi yekubatanidza shanduko inogona kunge iri nekuda kwekuburitswa kweiyo iPhone X, iyo ichave isina bhatani rekutanga uye, nekudaro, maitiro acho anofanirwa kuchinja hongu kana hongu.
Dzimwe dzidziso dzinoti ndizvo Zvekuchengetedza, sezvo iripo bhatani mubatanidzwa kusvika zvino wakonzera zvisingadiwe kutanga apo mudziyo waive wakachengetwa muhomwe. Kutendeseka, kubva mumaonero angu, ini handioni kuti ipfungwa ine simba rakawanda nekuti zvakaoma kwazvo kugadzira musanganiswa wemabhatani nekungochengeta chishandiso.
Chokwadi ndechekuti mune nyowani iPhone 8 uye 8 Plus maitiro atinofanira kuita simba restart zvachinja uye pazasi tinokuratidza maitirwo azvo:
Chekutanga pane zvese isu tichafanirwa kudaro kurumidza kudhinda uye kusunungura vhoriyamu kumusoro bhatani.
Ipapo, tichaita zvakafanana maitiro asi neiyo vhoriyamu pasi bhatani.
Pakupedzisira, tinofanira Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi, yakaiswa parutivi rwechigadzirwa, kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa pachiratidziri.
Sezvo isu tichiona, maitiro acho akachinja musanganiswa wemabhatani uye ichiita iyi imwe nzira yakaoma asi kwete izvo zvakaoma. Izvi zvinoratidza kuti nekuvhurwa kweiyo nyowani iPhone X, maitiro acho achanyatso fanika neaya ma iPhone modhi, nekuti nenzira iyi. hatishandisi bhatani rekutanga.
Kana iwe uine chero matambudziko nemaitiro aya kana uine chero mibvunzo, tinokukoka iwe kutisiira komendi kuti tikubatsire.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Force restarting iyo iPhone 8 inowedzera kuomarara
"Mhinduro yeshanduko iyi musanganiswa yakakosha inogona kunge iri yekuvhurwa kweiyo iPhone X, iyo ichave isina bhatani repamba uye, nekudaro, maitiro acho anofanirwa kuchinja hongu kana hongu"
Ini handinzwisise, iyo iPhone 7 haishandisi bhatani repamba kutangazve, ko kuvhurwa kweiyo iPhone x isina bhatani repamba kutangazve saka kunofanira kuitei?
Kutenda neruzivo, ini ndinonyora noti kuti ndinogona riini kutenga iphone X kana ndichida.
Lina beltran akadaro
Ndakaedza kutangazve chishandiso 8 kuwedzera, chakaramba chakaramba chisina mhinduro, chando, chii chandingaite?
Pindura kuna Lina Beltran
Juan Valdes akadaro
Ndine iphone 8 ine apuro yakavhurwa uye haina kugadziriswa pakadzvanya mabhatani ekusetazve
Pindura Juan Valdes